Inkcazo:Iphone Battery Extender,Inkonzo yebhethri yefoni,I-Battery ye-iphone ayikhokhanga
Home > Imveliso > Ibhetri ye-iPhone > IPhone 7 Ibhetri > I-iPhone entsha ye-Battery Replacement For iPhone Repair
Umzekelo No.: iphone 7 battery
I- iphone mAh i- 7 ye- beta ye-batter . iyakwamukela i-TI chisep kunye ne-brand entsha entsha ye-cobalt ibhetri yebhetri, emva kokuba umjikelezo wamaxesha ama-500 unama-80% ubuncinane. Sinika kwakhona i- iphone high capcity ibhetri 2200 mAh kulo mzekelo. Yonke iibhetri ye-iphone ine-CE, i-ROHS kunye ne-FCC ukuqinisekiswa, kunye newaranti engama-1 kunye neenkonzo ezithatha emva kokuthengisa.
Efanelekileyo: i-apple iphone 7
Umbane ongezantsi: 4.35V
Ubukhulu: Efana nebhetri ye-iphone yokuqala
Ukuhlawula ixesha: 3hours
IWarranty: 12 Inyanga
Iimpawu zebhetri yefowuni yexesha elide
Umthamo ophelele ngowama-1960 mAh, efana neyokuqala.100% ifanelana nefowuni yakho, qinisekisa ukuba isebenza kakuhle.
I-Hequanqingnuo inezolawulo ezipheleleyo kunye nezesayensi kunye nokugxila kwi-creditworthiness, siphila ngekhontrakthi, siqinisekisa umgangatho wemveliso, kwaye siyamukela imbonakalo yokuthengisa yeempawu eziphathekayo ze-mufti kunye neenzuzo ezincinci ngeentengiso eziphezulu. Ukuveliswa kweSatifikethi se-RoHS / CE / FCC, I-teknoloji engenakukhokelela, ivuselelwa kwakhona.Siya kugxininisa kumgaqo woBungqina bokuQala, ukulingana kunye nokuxhamla, ukuphuhliswa ngokubambisana, kunye neNkonzo eNgcono.
Iikhathalo zomkhiqizo : Ibhetri ye-iPhone > IPhone 7 Ibhetri
Iphone Battery Extender Inkonzo yebhethri yefoni I-Battery ye-iphone ayikhokhanga Iphone Battery 1 Iphone yeBattery Six iphone battery test New Iphone Battery Life I-iphone ye-Battery Case